Ndị na-emepụta ihe na ihe na-esi ísì ụtọ - China nke na-esi ísì ụtọ kandụl - Nkebi nke 4
omenala owu wicks esi ísì ụtọ kandụl
Agba na logo size nke e biri ebi
Nye ọrụ nlele maka icho mma ụlọ
Size: D5.4CM * H7.3CM
Anyị nwere ọgaranya ahụmahụ, tozuru okè technology na kandụl ahịa fọrọ nke nta ka afọ 20.
Anyị na-enye ODM OEM ọrụ ndị ahịa.
anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi ogologo oge na China.
Obere obere onyinye na-esi ísì ụtọ onyinye kandụl
Nke a pudding cup esi ísì ụtọ kandụl dị obere. Ọ nwere ike ijide gram 65 nke soy wax. Ọ bụghị naanị na ọpụrụiche kamakwa eji ihe mkpuchi, nke mara mma ma dị mma. Ọ nwere ederede matte, ị nwere ike ịhọrọ agba ịchọrọ, wee jiri silk bipụta akara ngosi ịchọrọ. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị maka onyinye nkwado na obere njem.
Size: dayameta 5.4CM * Elu7.3CM
Agba: multi-agba, anyị na-eme OEM ODM
ire ere ire ísì ụtọ na kandụl
Paraffin wax iko ite nkà kandụl
Kandụl a nwere ihe pụrụ iche, ọ bụghị naanị mara mma kamakwa ọ mara mma. Dị obere ọbọgwụ na-eme ka kandụl iko a na-adọrọ adọrọ. Enwere otutu kandụl a na-esi ísì ụtọ iji gboo mkpa gị. Ọ dị obere nke mere na ịnwere ike ijide ya n'aka gị. Nwere ike iji ya chọọ ụlọ mma. Nwere ike icho mma gị na ime, ọmụmụ na ihe ọ bụla ọzọ ohere ị na-eche na ị chọrọ.
Nlereanya: B04T B05T
Obere Nha: D6.4CM * H7.9CM
Nnukwu Size: D6.9CM * H9CM
okomoko ji achọ soy wax esi ísì ụtọ kandụl
Size: 8.8cm (Obosara) * 8.5cm (Elu)
Ahaziri label aromatherapy kandụl
Nke a Mason ite kandụl nwere a polished mmetụta na ọ bụ nnọọ obere.
Ha zuru oke maka ịgbakwunye ihe ịchọ mma ọ bụla na ihe ndozi ọ bụla. Mgbe ha na-ere ọkụ, ha ga-ekesasị ísì ụtọ na ikuku. Zuru oke maka ojiji kwa ụbọchị, agbamakwụkwọ, mmemme, aromatherapy, Spa, Reiki, Ntụgharị uche, athlọ ịsa ahụ.
Nlereanya: CB01P / CB02P / CB03P
Size: 8.8cm (Obosara) * 8.5cm (Elu) 7.1cm (Obosara) * 10.4cm (Elu)
9cm (Obosara) * 11cm (Elu)
Agba: Red, Brown, gwa anyị nke agba ịchọrọ, anyị nwere ike ịmụrụ gị
frosted iko esi ísì esi ísì ụtọ atụmatụ kandụl
Size: 7.1cm (Obosara) * 10.4cm (Elu)
Ogidi ọdịdị eke soy wax na-esi ísì ụtọ kandụl
Igwe Mason a nke a na-acha uhie uhie ga-enye ihe karịrị awa 30 nke oge ọkụ, ma mgbe ọ gwụchara, kandụl Mason kandụl ahụ bụ akpa iko nwere ike ịba uru na gburugburu ebe obibi.
Oriọna a na-esi isi! Ọ bụ kpọmkwem otu m chọrọ ụlọ m ga-esi isi. Ọ dị ka imetụ obi ọma nke ọma. Ọ bụ n'ezie ikenyeneke mbiet. Adịghị ahapụ ite gbara ọchịchịrị na anwụrụ ọkụ dị ka kandụl ndị ọzọ, na-ere ezigbo mma.
omenala Ji achọ grasìsì ísì ụtọ Glass kandụl
A na-eji kandụl ndị na-esi ísì ụtọ mejupụta ohere gị na isi; anyị ji mmanụ ndị kachasị mma jupụta ime ụlọ gị na ihe ndị ahụ mara mma.
Emere gị na ezinụlọ gị n'uche, kandụl a nke 100% Natural Soy wax abụghị nke na-egbu egbu, na-ere ọkụ ogologo, nke ejiri mmanụ dị mkpa wee nwee eriri wick 100%.
Agba: Green ， Yellow, Blue, wdg.
eke soy mason ite na-esi isi kandụl
Nye ọrụ nlele maka ịchọ ụlọ na agbamakwụkwọ
Elu àgwà esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ kandụl
Enwere ike isi ike ma ọ bụ isi ísì dị ka ihe ị chọrọ, na-abụkarị 1-10% na-esi isi. Candles ndị a soy wax na-esi ísì ụtọ bụ kandụl ndị kachasị ewu ewu na ahịa taa. Ọdịdị dị elu, kandụl eji aka ndị nka kpụrụ akpụ na-adị mma n’anya.
Size: 7.1cm (Obosara) * 5.6m (Elu)
<< <Gara aga 123456 Osote> >> Peeji nke 4/7